Misy prototype an'ny Samsung Galaxy Note 10+ miseho amin'ny horonantsary | Androidsis
Misy prototype an'ny Samsung Galaxy Note 10+ miseho amin'ny horonantsary
Aaron Rivas | | About us, Samsung
Roa andro sisa isika Andian-tsarimihetsika Galaxy Note 10 an'ny Samsung lasa ofisialy. Talohan'izay, ny fivoahana marobe isaky ny maodely mandrafitra ity fianakaviana ity dia niseho tamin'ny fotoana maro, niavian'ny angona maro momba ny mety mampiavaka azy ireo sy ny pitsopitsony eo amin'ny lafiny teknika ary koa ny antsipirian'ny endriny sy ny endriny.
Amin'ity fahafaha-manao vaovao ity dia lasa mavitrika kokoa ny raharaha, satria horonantsary mivantana an'ny mpampiasa iray mitondra ny Galaxy Note 10+ no tafaporitsaka. Ny fitaovana lehibe aseho amin'ny horonantsary dia toa ny terminal voalaza etsy ambony, satria manaraka ny zavatra rehetra voalaza etsy ambony amin'ny alàlan'ny vinavina. Na izany aza, tsy toa vokatra farany io fa tena prototype.
Ny fohy asehonay etsy ambany dia maharitra 30 segondra fotsiny. Ity dia navoaka voalohany, tao amin'ny Weibo, ny tambajotra sosialy bilaogy bitika bilaogy izay isehoan'ireo karazana fivoahana ireo matetika.
Hita eo am-pelatanan'ny mpampiasa tsy fantatra ny fitaovana. Izy io no mitantana azy io, raha ampifandraisina amin'ny tariby famahana izany, izay mety ho karazana USB-C. Tsy voalaza amin'ny antsipiriany kokoa izany. Araka ny azo aseho dia ampiasain'ny mpampiasa hilalao horonantsary izy io, nefa avy eo, tsy dia mahavita firy izy.
Ny sary fampiroboroboana Galaxy Note 10 Plus 5G an'i Verizon dia toa manamafy ny endrika ofisialy azy
Ny Galaxy Note 10 Plus dia andrasana hamely ny tsena a Processeur Samsung Exynos 9825, izay mbola tsy natomboka, ary / na a Qualcomm Snapdragon 855 Plus -miankina amin'ny faritra-. Antenaina ihany koa ny hitondra fampisehoana AMOLED mavitrika 6.8 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana QuadHD +, izay voalaza fa tsara indrindra amin'ny indostrian'ny smartphone. Ho fanampin'izay, ny fanonona dia vita amin'ny fakan-tsary fakantsary quad ao aoriana miaraka amina sensor 12 MP voalohany miaraka amina vava f / 1.5-2.5, fantsom-peo telephoto 12 MP miaraka amina f / 2.1, solomaso misy zoro feno 16 MP ary sensor. ToF (Fotoanan'ny sidina).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Misy prototype an'ny Samsung Galaxy Note 10+ miseho amin'ny horonantsary
Ny Samsung Galaxy Note 10 dia mety ho mora kokoa noho ny teo aloha